Ogaden News Agency (ONA) – Sacuudiga: $100 bilyan oo Amiirada Laga Qaaday & Sharciga cusub ee Shaqada.
Sacuudiga: $100 bilyan oo Amiirada Laga Qaaday & Sharciga cusub ee Shaqada.
Posted by ONA Admin	/ February 1, 2018
Boqor-Tooyada Sacuudiga ayaa xabsiga kasii deysay Amiiradii tujaarta ahaa ee la xidhay labo bilood kahor iyadoo la sheegay in dowlada ay dib usoo ceshatay lacag ka badan 100 bilyan oo dollar oo lagala wareegay Amiirada iyo maalqabeenada la xidhay.
Lacagtan iyo hantida dowlada la wareegtay ayaa isugu jira shirkado, dhulal iyo waliba lacag cadaan ah oo laga qaaday amiiradan sida uu sheegay Xeer illaaliyaha guud ee Sacuudiga. Hawlgalkan oo loogu magac daray la dagaalanka Musuq maasuqa ayaa ahaa mid uu doonayey dhaxalsugaha Maxamed Bin Salman in uu ku helo dhaqaale badan oo uu ku meelmariyo qorshihiisa iyo mashaariicda 2030 oo uu doonayo in uu isbadal weyn ku sameeyo dhaqaalaha iyo nidaamka ganacsi ee dalkaasi.
Dhinaca kale Wasaarada Shaqada iyo Shaqaalaha ee Sacuudiga ayaa soo saartay shuruuc cusub oo la xidhiidha shaqooyin si gaar ah loogu qoondeeyey in ay ka shaqeeyaan dadka u dhashay wadankaasi oo kaliya.
Dukaanada lagu iibiyo gawaadhida, electoric, mobilada, alaabta guryaha la dhigto iyo kuwa lagu gado qalabka dhismaha ayaa kamid ah goobaha la sheegay in ay ka shaqeyn karaan oo kaliya muwaadiniinta dalkaasi u dhashay, talaabadan oo ay dowlada Sacuudiga dooneyso in ay hoos ugu dhigto shaqo la’ aanta heysa dadkooda, wuxuuna go’aankan si gaar ah u taaban doonaa ajaanibta dalkaasi ka shaqeysa ee hawlahan horey u hayey.
Wasiirka Shaqada Cali bin Nasser ayaa sheegay in go’aankan uu yahay mid lagu balaadhinayo fursadaha shaqada oo ay heystaan ragga iyo haweenka u dhashay dalkaasi, si hoos loogu dhigo tirada dadka shaqo la’aanta ah oo hada gaadhaysa 12%.